အမေရိစီယမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(Americium မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ပလူတိုနီယမ် ← အမေရိစီယမ် → ကျူရီယမ်
2880 K ​(2607 °C, ​4725 °F) (calculated)
1st: 578 kJ/mol
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan, Albert Ghiorso (1944)
အတည်ငြိမ်ဆုံး အမေရိစီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
syn 432.2 y SF – –
syn 141 y IT 0.049 242Am
syn 7370 y SF – –
အမေရိစီယမ် (Americium) သည် ငွေရောင်နှင့် အဖြူရောင်ရှိသော သတ္တုဒြပ်စင်ဖြစ်ပြီး၊ ခြောက်သွေ့သော လေထု၊ အခန်းအပူချိန်တို့တွင် အရောင်မှေးမှိန်မှု နှေးသည်။ ၎င်းသည် ခဲ ထက်ပို၍ သိပ်သည်းမှု များသည်။ အချို့သော Americium ဒြပ်ပေါင်းများသည် ကာလအမျိုးမျိုး ရှိကြသည်။
၂ သဘာဝတွင် တွေ့ရှိရမှု အခြေအနေ
၃ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ
Americium ကို မီးခိုးငွေ့ sensor များ၌လည်းကောင်း၊ ဓာတ်မှန်ရိုက်ရာတွင် gamma ဓာတ်ရောင်ခြည် ဖြစ်ပေါ်စေရန် လည်းကောင်း၊ ဖန်အပြားများ ပြုလုပ်ရာ၌လည်းကောင်း အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် ၎င်း အိုင်ဆိုတုပ် သည် အသုံးပြုနိုင်သော ပမာဏ ထုတ်လုပ်ရန်မှာမူ ဈေးကြီးလှလေသည်။
သဘာဝတွင် တွေ့ရှိရမှု အခြေအနေ[ပြင်ဆင်ရန်]
Americium ကို သဘာ၀ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့ရှိရပြီး၊ နျူကလီးယား ဓာတ်ပြုမှုတွင် အဏုမြူထုတ်လုပ်ရာ၌ ယူရေနီယမ် ဒြပ်စင်များထဲမှ အနည်းငယ် တွေ့ရှိရသည်။ ထိုအနည်းငယ်သည် Am ၏ သဘာ၀ အရင်းမြစ် မဟုတ်ပေ။ နျူကလီးယား စက်ရုံများတွင် မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုမှ အမေရိစီယမ် ပြန့်နှံ့နိုင်သည်။ Plutonium 239Pu မှ Americium အိုင်ဆိုတုပ် 243Am ကို ကီလိုဂရမ် အရေအတွက်ထိ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ[ပြင်ဆင်ရန်]
နျူကလီးယား ထုတ်လုပ်မှုနှင့် မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုများ၌ အလွန်ပြင်းထန်သော Americium များ ထွက်ပေါ်လာတတ်သည်။ စားသောက်ခြင်း၊ အသက်ရှူခြင်း (သို့) အရေပြားများဖြင့် ထိတွေ့ခြင်းတို့ကြောင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်စေနိုင်သည်။ နျူကလီးယား စက်ရုံများတွင် လုပ်ကိုင်သူများ၊ ၎င်းနျူကလီးယား စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်သူများသည်လည်း Americium အပြင်းများနှင့် ထိတွေ့နိုင်သည်။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ အမေရိစီယမ်နှင့် ထိတွေ့မိခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် အဓိကသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ အမေရိစီယမ် သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းသို့ အလွန် လျင်မြန်စွာ ဝင်ရောက်ပြီး အရိုးများအတွင်း၌ အချိန်ကြာမြင့်စွာ တည်ရှိနိုင်သည်။ Americium သည် တဖြည်းဖြည်း ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးလာပြီး၊ ရေဒီယို သတ္တိကြွ ဒြပ်မှုန်နှင့် ရောင်ခြည်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းရောင်ခြည်များသည် မျိုးဗီဇ နှင့် ဆိုင်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အရိုးကင်ဆာကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
လူသားများသည် အမေရိစီယမ်အမြောက်အမြားနှင့် ထိတွေ့ပါက အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Americium သည် အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများထဲတွင် အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း အလျင်အမြန် အနည်ထိုင်သွား၍ ဖြစ်သည်။
Americium သည် ရေဒီယို သတ္တုကြွ အိုင်ဆိုတုပ်များတွင် အဓိက တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် မြေကြီးနှင့် ရေထဲတွင် အနည်းငယ် ပါရှိနိုင်သည်။ နျူကလီးယားလက်နက် စမ်းသပ်မှုများမှ Americium သည် လေထုထဲတွင် ကျန်ရစ်ပြီး ဆယ်စုနှစ်တစ်စုတိုင် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလွန်နှေးကွေးစွာ ယိုယွင်းပျက်စီးပြီး၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် အပင်များကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ တိရစ္ဆာန်များသည် Americium အမြောက်အမြားနှင့် ထိတွေ့ပါက ၎င်းတို့၏ အဆုတ်၊ အသဲ နှင့် သရက်ရွတ် တို့ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
Americium သည် အပင်များ၏ အောက်ခြေ မြေဆီလွှာထဲ၌လည်း အနည်းငယ် စုစည်းနေနိုင်သည်။ ၎င်းကို တိရစ္ဆာန်များ စားသောက်ခြင်း မပြုကြပေ။ Americium အလွန်အနည်းသော ပမာဏသည် ငါးများ၏ ကိုယ်ခန္ဓာ အသားများ (သို့) အခြားစားသောက်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများတွင် တည်ရှိနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းကို စားသုံးပါက ထို Americium သည် ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းတွင် စုစည်းနေမည် မဟုတ်ပေ။
↑ ၁.၀ ၁.၁ "The electrical resistivity and specific heat of americium metal" (1978). Journal of Low Temperature Physics 30 (5–6): 561. doi:10.1007/BF00116197. Bibcode: 1978JLTP...30..561M.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမေရိစီယမ်&oldid=722958" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။